Dacwaddii Dhibanayaasha Kufsiga ee la wada sugaayey oo mar kale dib u dhacdey - Horseed Media
Dacwaddii Dhibanayaasha Kufsiga ee la wada sugaayey oo mar kale dib u dhacdey February 2, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogleJournalist Abdiaziz Abdinur Ibrahim has been in detention since January 10
Waxaa maanta Maxkmadda magaalada Muqdisho la soo taagey 5 qof oo ku eedaysnaa Kiis loo bixiyey “Dhibanayaasha Kufsiga”, shanta qof ee Maxkmadda la keeney ayaa kala ahaa.
Gabadh saxaafadda u soo bandhigtey in la kufsadey waxaana lagu magacaaba Luul iyo ninkeedi
Weriye waraysi ka qaadey gabadha in la kufsadey sheegtey
Laba qof oo kale oo xiriirsiiyey Weriyaha iyo gabadha sheegtey in la kufsadey.
Maxkmaddii maanta ayaa xeer ilaalintu keenay dad markhaanti ah oo dhamaantood ku marag furaya in kiiskani yahay mid la been abuurtey, xeer ilaalinta ayaa sheegay in ay u harsan yihiin 16 qof oo kale oo markhaantiyaalah, waxaana qareenada u doodaya gabadha sheegtey in la kufsadey ay ka codadeen in uu keeno iyada oo la isku raacey in maxkmadda mar kale dib loogu dhigo maalinta Salaasada ah, waxaa mararka qaarkood dacwaddii maanta la maqlaayey BUUQ iyo isku dhexyaac.
Xeer ilaalinta ayaa maxkmada keenay caddeymo muujinaya in gabadha aan la kufsan si caafimaad ah markii loo baarey waxaana uu keenay Markhaantiyaal.
Qareen Maxamed Maxamuud Afrax ayaa shegay in ay maalinta Salaasada ay geyn doonaan markhaantiyaasha ay iyagun hayaan.
Dacwaddan ayaa ahayd mid caalamka soo jiidatey sida warbixin maanta ku soo bAxdey Horseed Media, Dalalka u danbeeyey ee ka hadley waxaa ka mid ahaa Maraykanka oo cod adag ku taageeray in caddaladd lagu dhameeyo Kiiskan isla markaana ay aad uga wel-welsan yihiin Galmada gacan ka hadalka iyo shaqaaqada ku dhisan, waxaana ka hadashey Afhayeenka Arrimaha dibadda ee Maraykanka Victoria Nuland.
Midowga Yurub ayaa sidoo kale su’aalaha ugu badnaa ee ay weydiinayeen Madaxweynaha Soomaaliya noqodey qaddiyaddan iyaga oo soo qaadanaya warbixinada Joornaaladda caalamku ka qoreen, Qaramada Midoobey ayaa marar badan ka hadashey Kiiskan iyada oo saxaafadda caalamku ay si weyn u qaadaa dhigeen.
Arinta sida weyn loola yaaban yahay ayaa ah in qof dhibane ah sida uu ku doodayo isagii la xiro halkii la soo qaban lahaa kuwa la eedeeyey. laakiin Hay’adda denbi barista Soomaaliya ayaa aminsan arin ka duwan taas oo ah in sheekadda dhan ay tahay mid la sameeyey sharafta Qaranimada Soomaaliyana wax loogu dhimaayo.
Haddii denbiga lagu soo eedeeyey lagu helo waxaa weriye Cabdicasiis Cabdinuur Ibrahim waxa uu muteysan karaa 6 sano oo xarig ah halka gabadha Luul la yiraahdo ay muetsyanayo 9 sano oo xarig ah marka la eego xeerka ciqaabta Soomaaliya qodobka 269 ee dhigaya ilalinta sharafta Qaranimada Soomaaliya.
Dib u dhigista Kiiskan oo ah markii labaad oo ay codsadaan Qareemada u doodaya dadka dhibanayaasha ah ayaan wax natiijo ah u keeneyn dowladda waxaana sii xoogeysanaya cadaadiska saaran Dowladda Xassan Shiikh Maxamuud oo hadda marti u ah dalka hoggaaminaya ka hortaga Galmada gacanka hadalka iyo shaqaaqada ku dhisan waa Britain, waxaana codsiyo badan oo loo jeediyey Britain laga codsadey in ay cadaadis ku saaraan Madaxda Dowladda in dadkaan la sii daayo wixii denbiga geystayna la soo qabto.